Izindlela Ezintathu Zokuqinisekisa Ukubandakanywa Kwesikrini Sakho Esincane Ukuba Nethonya Elikhulu | Martech Zone
Akungabazeki ukuthi ubhadane luguqule izindlela zokuthenga zabathengi nokulindelwe okuholela abathengisi ukuthola izindlela ezintsha nezingcono zokuzibandakanya ku-inthanethi. Ngaphezulu kokunyuka kwemali esetshenzisiwe ku-inthanethi ngo-2020 - kukhuphuke ngo-44% kusukela ngo-2019 ngaphezulu kwama- $ 861 billion e-US - kube khona ukwanda okukhulu kwezinketho zokugcwaliseka online, nge I-80% yabathengi balindele ukukhulisa ukusetshenziswa kwabo kwe-Buy-Online-Pickup-In-Store (IBOPIS) kanye neveni le-curbside futhi i-90% manje incamela ukulethwa kwasekhaya kunesitolo.
Abathengi banemali kakhulu kunakuqala uma kuziwa ekuthengeni nge-inthanethi futhi lokhu kuthenga okusha nokwandisiwe kokunethezeka ezweni lanamuhla elidijithali lokuqala kuzoba nemiphumela yesikhathi eside. Kungakho ama-brand kumele aqinisekise ukuthi yonke indawo yokuthinta ibonwa kuqala, iyashesha, futhi ayinasici, noma ngabe izethameli zabo namakhasimende abo ahlanganyela kuphi. Kulokho cishe 80% yabasebenzisi be-smartphone Manje bathenga kumadivayisi wabo weselula, kunethuba elikhulu lokuhlinzekela amadivayisi wesikrini amancane amakhasimende.
Amandla wezikrini ezincane athatha ezinye izinzuzo ezingekho-ezincane kufaka phakathi ukuzibandakanya okwandayo, ukuguqulwa, nokwethembeka komkhiqizo wesikhathi eside. AbakwaBrands kufanele banake izitayela ezintathu ezithile - ama-micro-video, ama-microbrowsers nokwenza kahle kwamaselula - ukuqinisekisa ukuthi bafinyelela ngempumelelo kwinani elikhulayo labasebenzisi be-inthanethi.
Eminyakeni yeTikTok ne-Instagram Reels, abathengi bajwayele amazwibela amafushane wokuzijabulisa noma imininingwane kudivayisi yabo yeselula. Imikhiqizo kufanele isebenzise lo mkhuba ngokwakha amavidyo kliphu amancane athatha ukunakwa kwesibukeli ngokushesha futhi abagcine bejabule futhi bezibandakanya. Ngemizuzwana nje yokuqukethwe, ama-brand angaletha umlayezo ohehayo okhulisa ukubukwa nokuguqulwa.
Okuqukethwe kwamavidiyo amancane kuvamise ukuba yimizuzwana eyi-10-20 ubude, okusho ukuthi ama-brand anesikhathi esifushane sokuqinisekisa ukuthi zonke iziqeshana zilethwa ngaphandle komthungo nangamandla azo aphelele. Ukufeza lokhu, ama-brand kufanele aqale aqinisekise ukuthi okuqukethwe kulungisa ukugcwalisa isikrini sayo yonke into, kungaba ikhompyutha yedeskithophu, ithebhulethi noma iselula. Konke okuqukethwe nakho kufanele kushintshelwe i-portrait noma i-landscape ukugwema ukulinganisa okumile okungaphula ukwakheka kwamakhasi, kusonte isithombe noma kubonise amabha amnyama azungeze ividiyo. Abakhangisi nabathuthukisi bangasebenzisa i-AI namandla okufunda ngomshini ukwenza kahle ukwahlukahluka kwamavidiyo wonke adingekayo kuwo wonke usayizi wesikrini, ukuma kanye nedivayisi.
Ngokwengeziwe, abathengisi nabathuthukisi kufanele banake ngokucophelela umbhalo ohlotshaniswa nevidiyo ngayinye, kufaka phakathi isihloko nesihlokwana. Lezi yizici ezibalulekile zokuqukethwe ezinikeza umbukeli umongo, ikakhulukazi ngoba 85% wokuqukethwe kwevidiyo kubukwa kuFacebook kubukwa ngaphandle komsindo. Ngaphezu kwalokho, ukuhlinzeka ngemibhalo engezansi enembile kubalulekile ukuhambisana nokufinyeleleka kanye nemihlahlandlela ye-ADA. Ukusetshenziswa kwe-AI nakho kungakhiqiza ngokuzenzakalela umbhalo futhi kufake amagama-ncazo kuvidiyo ngayinye.
Hlanganisa Amandla Ama-Microbrowsers
Ama-Microbrowsers ukubuka kuqala okuncane kwesayithi elanda ngaphakathi ezingxoxweni kuzinhlelo zokusebenza zemiyalezo eyimfihlo njengeSlack, WhatsApp neFacebook Messenger. Isibonelo, cabanga ngokuthi uthumele nini umama wakho isixhumanisi se-iMessage kumabhuthi kuhlu lwakho lwesifiso sokuzalwa. Iwebhusayithi yomthengisi ikhiqiza ngokuzenzakalelayo isithonjana esifanele sesithombe noma ukubuka kuqala kwevidiyo. Lokhu kumsiza ukuthi abone ukuthi isixhumanisi siyini futhi kwakha umbono omuhle ngophawu, okwandisa amathuba okuthi achofoze futhi athenge lawo mabhuzu njengesipho.
Lezi zixhumanisi ze-microbrowser zinikeza ithuba elikhulu lokuzibandakanya lelo ngeshwa imvamisa elinganaki. Imikhiqizo kufanele iqinisekise ukuthi lezi zithombe zokubuka kuqala noma amavidiyo akhonjiswa kahle kuzo zonke izinhlelo zokusebenza zengxoxo nemiyalezo, kanye nomsila omude wezinye izikrini njengamadivayisi wegeyimu aphathwa ngesandla nezinto zokusebenza ezihlakaniphile.
Onjiniyela kufanele baqiniseke ukuthi izixhumanisi ziyavuleka ngaphakathi kwama-microbrowser ngo:
Ukuchaza konke kulo lonke umaki we-HTML, nokukhawulela isihloko sibe ngamagama ayi-10 nencazelo ibe yizinhlamvu ezingama-240
Njalo usebenzisa i-Open Graph njengamakhaphu ukuphendula ama-microbrows ahlukile
Ukukhetha isithombe esithile se-unfurl esikhanga ngokubonakalayo futhi kuphoqa umamukeli ukuthi achofoze ukuthola eminye imininingwane
Kusetshenziswa "ama-nanostories" wevidiyo amafushane wama-microbrows ambalwa akhombisa ividiyo njengamanje
Ngokulandela lezi zeluleko, ama-brand angakusebenzisa ngokugcwele okuqukethwe yi-microbrowser futhi aqhube izincomo zontanga eziholela ekuchofozeni nasekuthengiseni. Ngokwengeziwe, bangasebenzisa idatha ukunikela ukuqonda emaphethini wezethameli nakokuncamelayo, nokuthi ingakanani ithrafikhi evela kokudluliselwa kontanga, noma "emphakathini omnyama." Lo mgwaqo we-microbrowser ongaqondile uyithuba elihle kakhulu labakhangisi - uma benedatha ethe xaxa yokuthi ngubani owabelana ngezixhumanisi ngamasheya azimele nangezingxoxo zamaqembu, kulapho bezokwazi ukukhulisa okuqukethwe namandla okudluliswa.
Yenza iSayithi Lihambisane Nobungane
Njengoba abathengi bethembela ekuthengeni online kaningi, sekubaluleke kakhulu ukuthi imikhiqizo inikeze okuqukethwe kwewebhu okunothe ngemidiya okulayisha kahle kuselula. Amakhasimende afuna umuzwa ohehayo nohlelekile osheshayo futhi ophendulayo. Ngeke balinde ukuzungeza ikhasi elizolayishwa. Eqinisweni, ukubambezeleka ngomzuzwana owodwa ekuphenduleni kwekhasi kungaholela ku 16% wehla ekwanelisekeni kwamakhasimende.
Imikhiqizo kumele igxile kwikhwalithi, ifomethi nosayizi wezimpahla zabo zedijithali ukufeza lokhu okulindelwe. Kwezithombe, onjiniyela kufanele benze usayizi omusha wezithombe ngobukhulu besakhiwo esithile, bazivumelanise nosayizi wokuqukethwe, ukulungiswa nokuhlelwa ukuze kulingane imvelo yohlelo lokusebenza. Izindinganiso ezifanayo ziyasebenza kuvidiyo, ngenkathi kubhekwa nekhwalithi yevidiyo ezongena ezimweni zenethiwekhi yomsebenzisi. Ngokwenza le webhusayithi ihambisane neselula, imikhiqizo ingaqiniseka ukuthi abasebenzisi bayojabulela isipiliyoni sokuthenga online esingaxabani esishayela ithrafikhi nokuthengisa.
Imiphumela Emikhulu Ivela Emininingwaneni Emincane
Sekuya ngokuya kubaluleke kakhulu ukuthi imikhiqizo ibheke kahle isu labo elincane lesikrini futhi iqinisekise ukuthi baphekela abasebenzisi beselula. Ukuhlanganisa imicondo yamavidiyo amancanyana, i-microbrowser, nokwenza okuhle kakhulu kweselula kuzoba ngukhiye ekuhlangabezaneni nokulindelwe ngabathengi banamuhla be-inthanethi nokuwina imiphumela emikhulu emhlabeni weselula.
Tags: ividiyo ye-aifacebook messengerAma-Reels we-Instagramiziphequluli ezincaneividiyo encaneamavidyo kliphuama-microbrowsersukuzibandakanya kweselulanokwenza kahle kweselulaijubane lekhasi leselulamobile ephendulayoisivinini seselulaividiyo yeselulamobile-nobunganeisivinini sekhasiisabeleividiyo emfushaneukuxegaisikrini esincaneTikTokifomethiukuhlelwa kwevidiyousayizi wevidiyowhatsapp
I-InboxAware: Ukubekwa Kwebhokisi Lemilayezo Engenayo le-imeyili, Ukuqapha Ukulethwa Nedumela